အိပ်မက်အိမ်: ကျွန်တော်၏ အတိတ် ကာလများ ဆီသို့ 
ကျွန်တော်၏ အတိတ် ကာလများ ဆီသို့ 
စာမရေးတော့ ပါဘူးလို့စဉ်းစားထားကာမှ သူငယ်ချင်း စာရေးဆရာ မိုးစွေနဲ့စကား ပြောမိကြတယ်။ မင်းလည်းစာပြန်ရေးကွာ ဘယ်အကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ၊ မင်းပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် ငါ တာဝန်ယူပြီး တင်ပေးမယ်တဲ့။ အဒီတော့ဖတ်တဲ့ သူတွေ အတွေ့ အကြုံ ဗဟုသုတလေး တစ်ခုခု ရပါစေ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ကျွန်တော်၏ အတိတ်ကာလများဆီသို့ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ ။
၁၉၉၉-၂၀၀၀ မှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့စစ်အစိုးရက စစ်မှုထမ်းဟောင်း သားသ္မီး များကို အကြွေးစနစ်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့စေလွှတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ် ။ မလုပ်ပေးလို့ လည်း မဖြစ်တော့ ဘူးလေ . . . ။ စစ်ဆေးရုံမှာ ရှိတဲ့ခြေပြတ် ၊ လက်ပြတ် ၊ မျက်လုံးကန်း စတဲ့ သူတွေ အများကြီးကို ဒီအတိုင်း ဖြစ်သလို ပြစ်ထားပြီး ၊ အလင်းဝင်လာတဲ့ 
တောတွင်း လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ တွေကို အိမ်တွေ ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးတွေပေး ဆိုတော့ဆေးရုံအတွင်းမှာ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ တယ်။ အဲဒီမှာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကရော အငြိမ်နေတော့ မှာလား ။ ဒီမှာပဲ အမြင် ၊ အကြား အာရုံ စသည်ဖြင့်အဓိက ကိုယ်အင်္ဂါများ ထိခိုက်ခဲ့ ရင် ဘယ်လောက် ၊ ခြေ ၊ လက် ကိုယ်အင်္ဂါများ ထိခိုက်ရင် ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် နစ်နာကြေးငွေထုတ်ပေး ခဲ့ တယ် ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်း တွေကိုလည်း ပင်စင်လစာ အနည်းငယ် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ တယ် ။ တစ်သွေး ၊ တစ်သံ ၊ တစ်မိန့်အောက်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီး စစ်မှုထမ်းလာခဲ့ ကြတဲ့ရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေ အတွက် ဖြေသိမ့် စရာ လေးတွေတော့ဖြစ်လာရတာပေါ့ လေ။
ကဲ . . . အခုလို အစိုးရက စစ်မှုထမ်းဟောင်း သားသ္မီးတွေကို မလေးရှား နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ကြဖို့အကျိုးဆောင်ပြီး ပို့ ဆောင်ပေးမယ်ဆိုမှတော့ရလာတဲ့အခွင့် အရေးကောင်းတစ်ခုကို ဘယ်သူက လက်လွှတ်ခံ မှာလဲ ။ ကိုယ့် သားသ္မီးတွေ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ရပြီဆိုရင် မိသားစုတွေ နေသာနိုင်ပြီ ၊ အူစို နိုင်ပြီပေါ့စတဲ့ အတွေးတွေနဲ့မရှိဝမ်းစာ၊ ရှိတန်ဆာ ရှိစုမဲ့ စု ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းထားသမျှ ထုပ်ရောင်းလို့ပြင်ဆင်ကြပြီပေါ့။ တစ်ချို့ ဆို အိမ်တွေ ၊ ခြံတွေတောင် ပေါင်ခဲ့ ကြရတယ်လေ ။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ လိုအပ်ရာရာ စာရွက်စာတမ်းတွေယူ လူစုရပ်က အင်းစိန် ၊ အောင်ဆန်း (စက်မှုလက်မှု ကျောင်း) ကို ရောက်ခဲ့ ရပြီပေါ့။ ကိုယ့် ရှေ့ မှာ မြင်ရတာ နည်းတဲ့ လူအုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ ။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က မြန်မာပြည်သား လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ စစ်မှုထမ်ဟောင်း သားသ္မီးတွေပေါ့ ဗျာ ။ တန်းစီဖေါင်ဖြည့် ထုံးစံအတိုင်း လူများတော့ ခန်းမအပြင်ကို လျှံထွက်လာလို့တစ်ချို့နေလှန်းခံလိုက်ရသေးတယ် ။
( အမိနိုင်ငံတော် အတွက်လား ၊ အမိတပ်မတော် အတွက်လား ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါ အတွက်ရယ်လို့တိတိကျကျ မသိပေမယ့်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ရှာပေးမယ့်သူရဲကောင်းလေးတွေ ပေါ့ ဗျာ။ )
အိမ်ထောင်ကျပြီးသား သူတွေကတော့၆(က) မှတ်ပုံတင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ကျွန်တော်အပါအ၀င် စကော့စကအရွယ် ၊လူပျိုလူလွတ် အများစု ၃(က) ကိုင်ဆောင်သူများကတော့ ၆(က) မှတ်ပုံတင်ပြောင်းဖို့လာရာလမ်းအတိုင်း ပြန်ခဲ့ ကြရတယ် ။ နယ်ကသူတွေ အတွက်တော့ထွက်ဟေ့ ဆို အခက်အခဲ စတွေ့ ရတာပါပဲ ။
အိမ်ပြန်ရောက်မှ မြို့ နယ် လ.၀.က ရုံးကို အမြန်ပြေးကြရတာပေါ့။ ဟိုရောက်တော့ လည်း သူလို၊ ကိုယ်လို သူတွေကအများသားရယ် ။ ကိုယ့် အပိုင်းကို တာဝန်ယူရတဲ့အရာရှိထံသွား ၊ ဆရာရယ်ကူညီပါအုံးပေါ့။ (သူတို့ကတော့ဘာကူညီရမလဲ . . . မမေးဘူးဗျ ။ ) ကူညီပါမယ်တဲ့ငွေ (၂၀၀၀) လောက်ကုန်မယ်တဲ့။ (လက်ခံ ပြေစာမဲ့ပြောတာနော် ) ကိုယ်ကလည်း လိုနေမှတော့တောင်းတောင်းပန်ပန် နဲ့ငွေကို ကြိုပေးပြီး မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ ဆရာရယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ရုံးကအပြန် အ၀င်ဝအရောက် ကြော်ငြာသင်ပုန်းကို ယောင်လို့ တောင်လှည့်မကြည့်ဝံ့ ခဲ့ဘူး ။ "လာဒ်ပေး ၊ လာဒ်ယူ ဒို့ ရန်သူတဲ့" မတတ်နိုင်ခဲ့ ဘူးဗျာ ။ မိုးခါးရေ ပဲပေါ့ ။ ကိုယ်မှ မသောက်ရင် နောက်ရောက်သွားမှာကို . . . အခွင့်အရေးဆိုတာကလည်း ၊ တိမ်တောင်သဖွယ် ဟန်ရေးကြွယ် မင်းရေး စိုးရေး မဟုတ်လားဗျာ ။
(၂) ရက်သာကြာသွားတယ် မှတ်ပုံတင်မပြောနဲ့ဖောင်တောင်မဖြည့်ရသေးဘူး ။ ဘာကြောင့် များလဲ မေးကြည့် တော့မြို့ နယ်လူကြီးမရှိလို့ခရိုင်လူကြီးဆီ တင်ပေးမယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ပဲ မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့မျှော်လင့် ချက်တွေနဲ့အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာခဲ့ ရတာပေါ့။ နောက်ထပ် တစ်ရက် ထပ်ကြာသွားတယ် . . . ခရိုင်လူကြီးလည်း မရှိပြန်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာ . . . ။ ( လ.၀.က ၀န်ထမ်းများလည်း အလုပ်များကြသားပဲ ၊ ) ဟိုလူ ဒီလူနဲ့နေသာကုန် အပြင်က ဆိုင်မှာထိုင်ရင် လက်ဘက်ရည်တိုက် ဒီလိုနဲ့တစ်နေကုန်ပြန်ရော ။
စစ်တပ်က ပင်စင်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ ဆရာကြီးတွေအဖို့စိတ်မရှည်နိုင်ကြတော့ ဘူး ။ တစ်ချို့ ကစပြီ . . . မြို့ နယ် ၊ ခရိုင် . . . ကဲ မရရင်တိုင်းကွာ . . .။ တိုင်း လ.၀.က လူကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ မယ်ပေါ့။ မြို့ နယ်က အရာရှိငယ်တွေ သူလုပ် ၊ ကိုယ်လုပ် ရယ်နဲ့ဘော်လီဘော ပုတ်နေကြပြီ ။ တစ်ချို့ ဆို သူယူတာ ၊ ငါယူတာနဲ့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်လွှဲနေကြပြီ ။ နောက်ဆုံး တီးတိုးတိုင်ပင်ကြပြီး သူတို့ ငယ်နိုင် တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်ကို ဖောင်တွေ အတင်းထိုးပေး ၊ သွားလေရာ့တိုင်းရုံးကို လွတ်လိုက်ပြန်တယ် ။
တိုင်းရုံးရောက်တော့ဟိုလူ့ စကားပြောလိုက် ၊ ဒီလူ့ စကားပြောလိုက် ယောင်ချာချာလုပ်နေလေရဲ့။ အလုပ်ရှုပ်တယ် ပြောရအောင်လည်း လက်ထဲကဖောင်တွေ ဖွင့် တောင်မကြည့်သေးဘူးဗျ ။ နောက်ဆုံးမှ သဘောပေါက်ကြတယ် ။ ငွေ (၂၀၀၀) ထပ်ပေးရမယ်တဲ့။ အင်း . . . ဒီဘူတာပဲ ပြန်ဆိုက်တာပဲဗျာ ။ " ပြောပြန် ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာကျမယ်" လို့ပြောချင်ပေမယ့်. . . ။ အဲဒီ အောင်မင်း ကိုတိုင်က မပြောတော့ကျွန်တော်တို့ လည်း မပြောရဲတော့ ဘူးဗျာ ။ ကဲ . . . ပေါက်တဲ့ နဖူးမထူးတော့ ပါဘူး ၊ ပေလိုက်ဦး ဟဲ့ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ (၂၀၀၀) ဆီ ဖောင်ကြားထဲ ညှပ်ပေးလိုက်ကြရတယ် ။
အလွယ်တကူ မဖြစ်လာနိုင်တော့ ဘူး ဆိုတာသိတဲ့ဗိုလ်ကြီး (ငြိမ်း) တစ်ဦးက " ဆရာကြီး ကိုအ၀ှာရေ ခင်ဗျားပဲ ၀င်တွေ့ လိုက်ပါဗျာ ။ ဒီပြင်ဆို နောက်နေ့ တွေထပ်လာနေရဦးမယ် ။ ရဲဘော်ရဲဘက် အချင်းချင်း ဒီလောက်တော့ကူညီမယ်ထင်ရတာပေါ့ ။" . . . " အင်း . . . မတူတော့ ဘူးလေ . . . ။ အခုခေတ်က သူတို့ ခေတ် ဖြစ်နေပြီဗျာ . . . ။ ဘာပဲပြောပြော လူ့ အောက်ကျို့ လို့မသေပါဘူးဗျာ ။ ကျုပ် ၀င်တွေ့ လိုက်ပါ့ မယ် ။ " ကိုယ့်ဝမ်းနာ ကိုသာသိမို့ဆရာကြီးကိုသာ ကျေးဇူးတင် အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်း အသီးသီး သက်ပြင်းကိုယ်စီ ခိုးရှိုက်ခဲ့ရတယ် ။
သိပ်မကြာလိုက် တိုင်းမှူးရဲ့ရုံးခန်းထဲမှ စာရေးတစ်ဦး ထွက်လာပြီး ၊ " လူကိုယ်တိုင် ဖောင်ယူပြီး ၊ တစ်ယောက်ချင်း ၀င်ခဲ့ ပါ " ဆိုမှ အားလုံး တော်သေးတာပေါ့ လို့သံပြိုင်ရေရွတ် ခဲ့ ရတယ် ။ ဒီပြင်ဆို ဘယ်လောက် စောင့် ရဦးမည် မသိ . . . ။
အပြန်လမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်တော့် စိတ်က တိုင်းမှူးကြီး စီမှာပဲ တ၀ဲလည်လည် ကျန်နေရစ်တော့ တယ် . . . ထိုင်ခုံပေါ်မှာ မိန့် မိန့် ကြီးထိုင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးနေမယ့်လ.၀.က တိုင်းမှူးကြီး ရဲ့လက်ကလေးတွေစီ ကိုပါ . . .။